न्युरोसर्जन डा.यमबहादुर रोका भन्छन : बिरामी निको भएर घर फर्किदा असाध्यै खुसी लाग्छ - Purbeli News
न्युरोसर्जन डा.यमबहादुर रोका भन्छन : बिरामी निको भएर घर फर्किदा असाध्यै खुसी लाग्छ
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, आश्विन १२, २०७५ समय: ५:२५:३२
न्युरोसर्जन डा.यमबहादुर रोकाको नाम नसुन्ने सायद बिरलै होलान । सन २००९ देखि बिराटनगरमा रहेको न्युरो अस्पतालमा रही हालसम्म ४ हजार बढी सफल शल्यक्रिया गरेका उनी दक्षिण एशियामै प्रसिद्ध रहेका छन । बाग्लुङ जिल्लाको वलेवामा जन्मिएर सानै उमेरमा आफना जागिरे बुबासँग भारत प्रबेश गरेका उनले प्रारम्भिक शिक्षा त्यही आर्जन गरे । त्यसपछि उनले सिंगापुर लगायत आधादर्जन बढी देशहरुमा पुगेर डाक्टरको पढाई पुरा गरे । सन २०१८ मा सिंगापुरमा आयोजित आईकन अफ हेल्थ केयर अवार्ड बाट सम्मानित उनले दर्जनौ अवार्डहरु हात पारेका छन ।
पढाई पुरा गरेपछि शूरुमा काठमाण्डौमा पुगेका उनलाई ग्रामिण क्षेत्रमा पुगेर सेवा गर्ने रहर लाग्यो । त्यसपछि उनी धरानस्थित बिपि कोईराला स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानमा सन २००० मा प्रबेश गरेका थिए । त्याँहा ९ बर्ष सेवा गरेर उनी बिराटनगर प्रबेश गरेका हुन । बिराटनगर आएपछि उनले निरन्तर न्यरो हस्पिटलमा रहेर सेवा गरिरहेका छन ।
कसरी शुरु भयो यहाँको स्वास्थ्य क्षेत्रको यात्रा ?
म बाग्लुङमा जन्मिए,सानैमा लाहुरे बुबा सँगै भारत गएँ,त्यहि अध्यायन गरेँ,मलाई स्वास्थ्य क्षेत्र पढेर सेवा गर्ने सानैदेखि मन थियो । सोही अनुरुप पढँदै गएँ र पढाई पुरा गरेर आफनै देश नेपाल फर्किएको हुँ ।
भारतमा पढनुभयो, पछि सिंगापुर लगायतका देशमा पढनुभयो फेरी नेपाल किन फर्किनुभयो ?
म जहाँ पढेपनि नेपालको माया छातिभरी थियो,गरिब र दिनदुखीको सेवा गर्छु भन्ने सानैदेखिको सोच हो सोही अनुरुप नेपाल फर्किए । त्यसपछि त्यस्तो ठाँउ खोजी गर्ने क्रममा धरान आएँ र अझै बृहत सोचका साथ बिराटनगर आएको हुँ ।
तपाईलाई बिरामीले भेटन गाहे छ अनि तपाईको शुल्क पनि महंगो छ भनिन्छ नी ?
म २४ सै घण्टा बिरामीको सेवामा हुन्छु । मलाई फुर्सद कम हुन्छ । म उहाँहरुकै सामुन्ने हुन्छु मलाई भेटन कुनै गाहे छैन । धेरैजसो म अप्रेसनमा ब्यस्त हुने भएका कारण सोही समय त्यस्तो हुनसक्छ । अर्को कुरा यो न्युरो सम्बन्धि सबै प्रबिधिहरु महंगो नै हुन्छ । मैले महंगो शुल्क लिएको भन्दा पनि बिशेष गरी नशा र हड्डी सम्बन्धीका प्रबिधि नै महंगो हुन्छ ।
अहिले सम्म कति शल्यक्रिया गर्नुभयो ?
ठयाक्कै गन्न गाह्रो होला तरपनि ४ हजार बढी सफल शल्यक्रिया गरेको छु ।
पछिल्लो समय तपाईले उपचारमा लापरबाही गर्न थाल्नुभयो भन्ने छ नी ?
यो गलत कुरा हो । मलाई लाग्दैन मैले बिरामीको उपचारमा लापरबाही गरेको छु । मैले अहिले सम्म थाहा पाएको छैन । हुनसक्छ कुनैबेला धेरै किसिमका रोगहरु लागेका बिरामी आउनुहुन्छ । उहाँको उपचार गरिन्छ तर उहाँको अर्को रोगका कारण मृत्यु हुन्छ । सम्भवत मैले उपचार गरेका बिरामीको मेरो गलत उपचारका कारण मृत्यु भएको मलाई थाहा छैन ।
यति लामो समयको अबधिमा कुनै सम्झनलायक क्षणहरु छन ?
धेरै छन,जब मैले बिरामीको उपचार गर्छु,उहाँहरु निको भएर खुसीसाथ घर फर्कनुहुन्छ,त्यो बेला असाध्यै खुसी लाग्छ,कतिसम्म भने म कतै टाढाको यात्रामा जान्का लागी एअरपोर्ट पुगेर पनि बिरामीको उपचारका लागी धेरैपटक फर्किएको छु ।
कहिलेकाँही लाग्दैन,बेकारमा यो पेशा रोजेछु ?
पटक्कै लाग्दैन,मलाई पेशाले सन्तुष्टि दिएको छ । कहिलेकाँही फुर्सद भयो भने सबै घरपरिवारलाई समय दिन नसक्दा खल्लो महशुस हुन्छ,तरपनि मेरो श्रीमती एकदमै बुझने र मलाई सपोर्ट गर्ने भएका कारण म एकदमै खुसी छु ।
विवाह कहिले गर्नुभयो ?
बिवाह मैले सन २००१ मा गरेको हुँ ।
प्रेमविवाह की मागी बिवाह ?
बिवाहपछि र अघिको जिवन ?
बिवाह अघि पढनमै ध्यान दिईयो । तरपनि एउटा कुरा मनमा खेलरहन्थ्यो म नेपाल नै फर्किन्छु । नेपालमै बिवाह गर्छु अनि नेपालमै सेवा गर्छु । यो मेरो सपना पुरा भयो सोचेजस्तै भयो । यहि क्षेत्रमा कार्यरत श्रीमती पनि पाएँ । उनको साथ र सहयोगका कारण म आज यहाँ छु । त्यसैले म एकदम सन्तुष्ट र खुसी पनि छु ।
तपाईको जन्मस्थान र दुर्गम क्षेत्रहरु जुन ठाँउका लागी केही सोच्नुभएको छ ?
धेरै सोचेको छु । मेरो बुवाले पनि सो क्षेत्रमा धेरै समाजसेवा गर्नुभएको छ । मैले पनि हरेक पटक त्याँहा पुग्दा औषधीहरु लिएर जान्छु,त्यस क्षेत्रका स्वास्थ्यका बारेमा चिन्तित छु । आगामी दिनमा पनि सो क्षेत्र र दुर्गम क्षेत्रका लागी धेरै काम गर्ने सोच रहेको छ ।